Ishaja engenazingcingo, i-Usb C Adapter, ukutshaja ngaphandle kwamacingo- iGopod
Ukugxila kumzi-mveliso kushishino lwee-elektroniki zabathengi ngaphezulu kweminyaka eyi-15.
Iimitha zesikwere ezingama-35,000
Ukuhlolwa kwemveliso eyi-100% ngaphambi kokuziswa
Ngaphezulu kweenjineli ezili-100 zeenkonzo zokwenza ngokwezifiso
Ingcali ODM / OEM yesiko-ezenziwe mobile & iipilisi izincedisi iminyaka engaphezu kwama-15, iimveliso zithunyelwa kulo lonke ihlabathi.
Malunga neGopod Group
Yasekwa ngo-2006, i-Gopod Group Holding Limited yinkampani eyaziwayo kwilizwe liphela ene-R & D, imveliso kunye nokuthengiswa kweekhompyuter kunye nezixhobo zefowuni eziphathwayo. IGopod ineefektri ezimbini eShenzhen naseFoshan egubungela ummandla opheleleyo weemitha zesikwere ezingama-35,000, enabasebenzi abangaphezulu kwe-1,500. Ikwakha i-350,000-square-meter ye-high-tech park epaki eShunde, eFoshan. IGopod inamaqhina apheleleyo okubonelela ngemveliso kunye nomzi mveliso kunye neqela eliphezulu le-R & D lamalungu angaphezu kwe-100. Inika iinkonzo zokwenziwa kwemveliso ebanzi ukusuka kuyilo lwangaphandle, uyilo lolwakhiwo, uyilo lwesekethe kunye noyilo lwesoftware ukuyila ukukhula kunye nokuhlangana. Inkampani ineeyunithi zeshishini kubandakanya i-R & D, ukubumba, ukuvelisa intambo, iworkshop yetshaji yamandla, iworkshop ye-CNC yentsimbi, i-SMT, kunye nendibano. Ifumene i-ISO9001: 2008, ISO14000, BSCI, SA8000 kunye nezinye izatifikethi.
FUNDA NGOKUGQITHISILEYO NGEENKCUKACHA
Bathengi abathandekayo, ngovuyo olukhulu thina Gopod Group Limited sikumema ukuba ubekho kwi-CES yamanye amazwe ye-2020. Nceda ubone apha ngezantsi:
BaThengi abathandekayo, ngolonwabo olukhulu thina Gopod Group Limited siyakumema ukuba ubekho kwi-2019 ka-Okthobha i-HK Global Sources Fair. Nceda ubone ngezantsi info umnquba: Umhla: 11-14 Okt. 2019/18t ...
Ngovuyo olukhulu thina Gopod Group Limited siyakumema ukuba ubekho kwi-2018 Taipei Computex. Nceda ubone apha ngezantsi:
BaThengi abathandekayo, ngovuyo olukhulu thina Gopod Group Limited sikumema ukuba ubekho kwi-2019 ka-Epreli iHK ye-Source Global Fair. Nceda ubone ngezantsi ulwazi lwethu lomnquba: Umhla: 11-14 Oktobha 2019 / 18- 21 ...
Bathengi abathandekayo, ngovuyo olukhulu thina Gopod Group Limited sikumema ukuba ubekho kwi-2019 International CES. Nceda ubone apha ngezantsi:
Iqela leGopod ngokujonga ngokunyanisekileyo eliPhambili ekuveni ukuvela kwimibuzo yakho, ukubuyela umva.